Panama: Xabaal-Wadareed Laga Helay Deegaan Ay Ka Howlgasho Koox Diimeed – Borama News Network
Panama: Xabaal-Wadareed Laga Helay Deegaan Ay Ka Howlgasho Koox Diimeed
Booliska Panama ayaa sheegay inuu baarayo xabaal wadareed ay rumaysan yihiin inay ku jiraan haraadiga dad ay dileen koox diimeed.
Baarayaasha ayaa waxa ay isha ku hayaan soo faagista qalfoofka ku haray deegaan fog oo ku yaal gobolka waqooyi-galbeed ee ee Ngäbe-Buglé ee dalkaas halkaas oo ay ku nool yihiin dadka waddankaas loogu tagay.
Bishii Janaayo ayaa goob halkaas u dhaw waxaa laga helay xabaal-wadareed ay ku jireen maydadka todoba qof. Dhibanayaashaas oo lala xiriiriyay koox diimeed la rumaysan yahay inay qaadaysay weerrar ka dhan ah dad ay u arkaan inay dhibaato yihiin.
Dacwad ooge Azael Tugri ayaa sheegay in baarayaasha ay qasab ku noqotay inay muddo 10 saacadood ah buuraha fuulaan si ay u gaaraan xabaal-wadareedka, kaas oo laga helay dhinaca waqooyi ee gobolka Ngäbe Buglé, bartaas oo webi u dhaw.
Deegaankaas ayaa waxa uu 350km galbeedka ka xigaa magaalada caasimadda ah ee Panama City.
“Waqtigan la joogo suuragal ma ahan inaynu go’aan ka gaarno jinsiga maydadka ama dadka xabaal-wadareedka laga helay,” ayuu u sheegay warbaahin maxalli ah.
Dhammaan haraadiga ayaa waxaa loo diray qolalka maydadka lagu kaydiyo ee gobolka Chiriquí halkaas oo lagu baari doono, waxaa sidaas lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska dacwad oogaha (oo ku qornayd luuqadda Spanish-ka).
Goor sii horraysay todobaadkan ayaa boolisku waxa uu soo xiray hogaamiye la sheegay inuu maamulo koox diimeedka New Light of God, kooxdaas oo lala xiriiriyay xabaal-wadareedkii la helay bishii Janaayo.
Xabaal-wadareedkaas – oo maydadkii laga helay ay ku jireen haweeney xaamilo ah, shan caruur ah iyo canug markaas soo hanaqaaday – ayaa waxaa la helay kaddib markii saddex qof oo tuulooyinka aaggaas ku xeeran deggan kuwaas oo goobtaas ka soo baxsaday isbitaalkana la dhigay, dacwad oogayaasha ayaa waqtigaas sidaas sheegay.
Hogaamiyihii Kooxda Macawislay Oo Lagu Dilay Magaalada Baladwayne
“Waxaan Xabsi Ku Galay Map ka Somaliland Oo Harag Aan Kasameeyay” Muwaadin Farshaxan Sameeyay Oo La Xidhay
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow Oo Si Kulul Ugu Hadlay Weerarka Ay Ciidamada Kenya Dadka Shacabka Ah Ku Laayeen
Xeer Cusub Oo La Horkeenay Golaha Wakiilada Somaliland Oo La Horkeenay Xeer Cusub